Ukujonga emva kuthengiso lweeholide ngo-2013, kunye nokugcina engqondweni ngo-2014 | Martech Zone
NgoLwesibini, Januwari 21, 2014 UKelsey Cox
Phambi kokuba usete uhlahlo-lwabiwo mali lwakho lwamatye kulo nyaka, qiniseka ukuba ujonga emva kwinto ebesikwazi ukuyifunda kulo nyaka uphelileyo. Ukuqonda idatha elula ukusuka kwixesha lokuthenga lika-2013 kunokunceda ukwazisa indlela onxibelelana ngayo, kunye nentengiso kuyo, kubathengi. Ukufumana oko kuncede nokwenzakalisa amava abathengi okuthenga ngexesha leeholide zika-2013, Ingcaciso kuvavanywa abathengi abayi-1,000 XNUMX kwaye baqulunqa idatha kwi-infographic engezantsi.
Xa kufikwa ekuphembeleleni abathengi, ama-48% abathengi athi ukulinganiswa kunye nokuphononongwa yinto ebenze ukuba bandwendwele ivenkile ekwi-intanethi, ilandelwe kukunyusa nge-imeyile kwi-35% kunye neziphumo zophando zikaGoogle ezibandakanya imifanekiso yemveliso kwi-31%. Amashumi asixhenxe anesihlanu eepesenti kwabo baphononongweyo baphanda ukulinganiswa kunye nokuphononongwa kabini okanye nangaphezulu ngaphambi kokundwendwela ezivenkileni. Ngelixa abantu basetyhini be-145% ngaphezulu kokunyusa i-imeyile kwii-smartphones zabo zokuthenga ezivenkileni, amadoda angama-20% amathuba okuba akhangele amaxabiso angcono kwenye indawo ngaphambi kokuthenga kwabo ezivenkileni. Ngo-2013, ukusetyenziswa kweevenkile ezinophawu lwentengiso kukhule ngama-48%, kwaye iivenkile ezihambisa ezona zixhobo zingaguquguqukiyo nezisebenzayo zamakhasimende edijithali zithande ukuthengisa kakhulu.
Ukuziphatha kwebali? Xa ukuthengisa iimveliso kubathengi, kubalulekile ukugcina engqondweni, ngokukodwa kwiselfowuni. Ngakumbi nangakumbi abathengi benza uphando kwaye bafuna iindlela zokufumana izithembiso (inqaku: email marketing), Kwaye le meko iya kuqhubeka ikhula ngokufikeleleka kwezixhobo eziphathwayo ezikwazi ukubonelela. Ke, jonga kwaye wandise uphononongo lwakho, kubandakanya ukubonwa, sebenzisa i-imeyile kunye nokwandisa usetyenziso ukuze uqiniseke ukuba ulungiselelwe unyaka we-2014 ophumeleleyo.
tags: umthengiIinkcukachaeCommerceemail Marketingkwi-infographicurhweboUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiIvenkile